Xasan Sheekh Maxamuud oo qoraal qiiro leh kasoo diray dalka Turkiga (Soomaaliyey I Maqal) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xasan Sheekh Maxamuud oo qoraal qiiro leh kasoo diray dalka Turkiga (Soomaaliyey I Maqal)
Maanta dalka waxaa ka jirta dowladdii SHANAAD ee burburkii ka dib oo uu hoggaaminayo madaxweynihii SAGAALAAD oo soo magacaabay Ra’iisulwasaarihii 13aad burburkii ka dib. Doorashada madaxweynaha waxaa taageeray dad aad u tira badan oo Soomaali ah sidoo kale Ra’iisul-wasaaraha waxaa lagu ansaxiyay cod wadar-oggol ah ee golaha shacabka. Muddoo usbuucyo ah madaxweynaha iyo ra’iisul-wasaaraha waxay wadeen la tashiyo lala sammeynayey golaha shacabka iyo qeybaha bulshada gaar ahaan qabaa’ilka.
Intaas ka dib, Ra’iisul-wasaaraha wuxuu dhisay xukuumad ay isaga, madaxweynaha iyo qeybo ka mid ah dadkii ay la tashadeen u arkeen iney ku Habboon yihiin xilka loo magacaabay raggaas iyo gabdhahaas Soomaaliyeed. Inkasta oo muddadii magacaabista xukuumadda aan soo moogahay dalka, haddane waxaa saxaafadda, baraha bulshada iyo ila wareedyo kala duwan ku arkaa ama ka maqlaa tabasho ka soo yeereyso xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo qabaa’ilka qaarkood. Aniga oo ka duulayo waayo aragnimadeyda iyo inaan ahay oday Soomaaliyeed oo siyaasi ah kana tirsan golaha shacabka, waxaan jecleystay, anigoo soo koobaya, inaan idin la wadaago arrimaha soo socda:
W/Q:- Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud